कहाँबाट सुरु भयो आलिया-रणवीरको प्रेमकथा ? | Nepal Ghatana
कहाँबाट सुरु भयो आलिया-रणवीरको प्रेमकथा ?
प्रकाशित : २९ चैत्र २०७८, मंगलवार ०५:५९
बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्ट र अभिनेता रणवीर कपुरको प्रेमकथा अहिले चर्चामा छ । भट्ट परिवारका अनुसार दुवैले बिहे गर्न लागेका छन् । विवाहको मिति पनि तय भएको छ ।
उनीहरुको प्रेमकथाको बारेमा कुरा गर्दै आलिया भट्टले आफ्नो पहिलो फिल्म रिलिज हुनुअघि नै रणवीर कपुरप्रति आफ्नो प्रेमको खुलासा गरिसकेकी छिन् । त्यो वर्ष २०१२ थियो, जब आलियाको फिल्म ‘स्टुडेन्ट अफ द इयर’ आएको थियो ।
आलिया भट्ट र रणवीर कुपरको विवाहको चर्चा लामो समयदेखि चलिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा एकसाथ तस्विर आएपछि मानिसहरूले उनीहरूको विवाहको मिति सोध्न थाले।
अहिले बिहेको मिति निस्किएको छ । आलिया भट्टका काका रबिन भट्टले यस कुराको पुष्टि गर्दै भने, ‘आलिया र रणवीरको विवाह १४ अप्रिलमा हुनेछ। विवाहको रिसेप्सन पाँच दिन अर्थात् अप्रिल १७ देखि १८ सम्म हुनेछ। विवाहको विधि आरके हाउसमा हुने भएको छ। ।’
आलिया र रणवीरको विवाह मुम्बईको आरके हाउसमा हुनेछ । विवाह समारोहमा कपूर र भट्ट परिवारसँगै उनका नजिकका साथीहरू पनि सहभागी हुनेछन्। आलियाले बिहेअघि आफ्ना खास साथीहरूसँग ब्याचलर पार्टी पनि गर्ने छिन् ।
आलिया नीतु कपुरको मनपर्ने अभिनेत्री
आलिया भट्ट अब कपूर परिवारसँग जोडिन लागेकी छिन् । यसअघि उनले कपूर परिवारसँग फिल्ममा काम गरिसकेकी छिन् ।
आलियाले आफ्नो पहिलो फिल्म ‘स्टुडेन्ट अफ द इयर’मा अभिनेता ऋषि कपूरसँग काम गरेकी थिइन् । त्यसपछि आलियाले ऋषि कपूरसँग फिल्म ‘कपुर एन्ड सन्स’ मा पनि काम गरेकी थिइन् ।
ऋषि कपुरले धेरै पटक आलिया भट्टको अभिनयको तारिफ गरेका थिए । उनले धेरै पटक भनेका छन् कि आलिया आजका युवा कलाकारहरूमध्ये सबैभन्दा प्रतिभाशाली अभिनेत्री हुन्।
ऋषि कपूर जस्तै आलियाको रणवीरकी आमा तथा अभिनेत्री नीतु कपूरसँगको सम्बन्ध पनि निकै विशेष रहेको छ । आलियाको तारिफ गर्दै नीतु कपुर भन्छिन्, ‘म आलियालाई धेरै माया गर्छु । आलिया एक अद्भुत व्यक्ति हो। र धेरै प्यारी। उनीहरु मिलेर राम्रो जोडी बनाउन सक्छन् र अब म पनि उनीहरुको बिहेको पर्खाइमा छु ।’
कफी विथ करणमा के भनिन् आलियाले ?
आलिया भट्टले ‘कफी विथ करण’ शोमा रणवीर कपूरप्रति आफ्नो झुकाव रहेको संकेत गरेकी थिइन् । जब उनी पहिलो पटक आफ्नो फिल्म ‘स्टुडेन्ट अफ द इयर’ को प्रमोशनका लागि शोमा पुगेकी थिइन् । शो मा निर्देशक र निर्माता करण जोहरले उनलाई सोधे, ‘तपाईं आफ्नो विवाह स्वयंवरमा कुन तीन कलाकारहरू हेर्न चाहनुहुन्छ।’
यसमा आलियाले सबैभन्दा पहिले रणवीर कुपरको नाम लिइन् । त्यसपछि सलमान खान र आदित्य रोय कपुर आए ।
त्यसपछि करण जोहरले थप दुई प्रश्न सोधे जसको जवाफमा आलियाले पनि रणवीर कपुरको नाम लिएकी थिइन् । यी हुन् आलिया ‘स्टीमी सीन’ अर्थात् ‘फेटिश सीन’ गर्न चाहन्छिन् र उनी कोसँग बिहे गर्न चाहन्छिन् । उनले त्यतिबेला भनेका कुराहरु अब यथार्थमा परिणत हुँदैछन् ।
आलिया र रणवीरको पहिलो भेट
आलिया भट्टको प्रेमकथा सञ्जय लीला भन्सालीको सेटबाट सुरु भएको कुरा कमैलाई थाहा छ । आलिया भट्टले एक अन्तर्वार्तामा आफूले सन् २००५ मा पहिलो पटक रणवीर कपूरलाई देखेकी थिइन् र ‘त्यसपछि पहिलो पटक रणबीरसँग क्रश भइन्।’
उनले भनिन्, ‘जब म सञ्जय लीला भन्सालीको फिल्म ‘ब्ल्याक’ को लागि अडिसन दिइरहेको थिएँ, रणवीर त्यहाँ सहायकको रुपमा काम गरिरहेका थिए । उहाँलाई देखेर मेरो मन हारेको थियो ।’
आलिया भट्ट र रणबीर कपुरको अफेयरको चर्चा त्यतिबेला सुरु भएको थियो, जब उनीहरु दुबैले निर्देशक अयान मुखर्जीको फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ साइन गरे ।
सुरुमा यो फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ को प्रमोशनको एउटा हिस्सा हो भन्ने मानिसहरूले सोचेका थिए तर बिस्तारै ब्रह्मास्त्रको सुटिङको समयदेखि नै उनीहरु एकअर्कालाई डेट गर्दैछन् भन्ने हल्ला पनि चल्न थाल्यो ।
सोनम कपुरको विवाहको रिसेप्शनमा पहिलो पटक आलिया र रणबीर एकअर्काको हात समातेर अफेयरको खबरले थप चर्चा पाए । त्यसयता दुवैलाई धेरै अवार्ड समारोहमा सँगै देखिएका छन् ।
आलिया कपूर परिवारसँग देखिएकी थिइन्
रणवीर कपूर बलिउडका ती नायक मध्ये एक हुन् जसको नाम दीपिका पादुकोण, कट्रिना कैफ र सोनम कपूर जस्ता धेरै अभिनेत्रीहरूसँग जोडिएको छ। तर, रणवीर कपूरकी प्रेमिका र परिवारसँगै पारिवारिक समारोहमा सहभागी भएको पहिलो पटक भएको छ ।
आलिया भट्ट आफ्ना बुबा महेश भट्ट र आमा सोनी राजदानसँग कपूर परिवारका धेरै पारिवारिक समारोहहरूमा लंच र डिनर बाहेक देखिएकी थिइन्। यति मात्र होइन, शशि कपूर र ऋषि कपूरको मृत्युपछि पनि आलिया भट्ट कपूर परिवारको शोकमा सहभागी देखिएकी छन् ।
रणवीर र आलिया धेरै टिभी विज्ञापनहरूमा पनि सँगै देखिएका छन्। अब विवाहपछि दुवै फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’मा देखिने भएका छन् ।
यो चलचित्रको छायांकन लामो समयदेखि चलिरहेको थियो । कोरोनाका कारण फिल्म बन्न निकै समय लाग्यो । अयान मुखर्जीको निर्देशनमा बनेको यस फिल्ममा रणवीर र आलियाका अलावा अभिनेता अमिताभ बच्चन पनि देखिनेछन् ।
बलिउड जोडी रणवीर र आलियाको विवाह अप्रिल १७ मा